Boracay, ebe kachasị mma na Philippines | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Philippines
Philippines bụ obodo agwaetiti buru oke ibu ya mere n'oge ị gara ileta ya, mmadụ aghaghị ịtụgharị uche na ee ma ọ bụ ee njem dị n'ime. Ọnụ ụzọ bụ isi obodo, Manila, mana ebe ọ bụ maka ileta ụfọdụ n'ime osimiri kachasị mma n'ụwa, ọ dị mkpa ịga n'ihu ma gafee Boracay.
Boracay bụ agwaetiti dị ihe karịrị narị kilomita atọ site na Manila, a magburu onwe ebe izu ike ma ọ bụ nwere fun, ihe ọ bụla ị na-achọ, dị ka ọ na-enye ma ohere na nke kacha mma odida obodo na ụwa. A na-akpọkarị ya dị ka Ibiza nke Asia. Ma otu esi esi na Manila gaa Boracay? Ebee ka ị ga-anọ otu ebe? Olee otu i si aga? Kedu mgbe ị kwesịrị ịga? Ọ bụrụ n ’ị na-eche echiche ịgagharị na Philippines mgbe ahụ isiokwu taa bụ maka gị.
2 Otu esi esi Manila gaa Boracay
3 Boracay, agwaetiti nke oge atọ
Ndị njem bịara na agwaetiti a na 70s na afọ iri na-eso ya ọ ghọrọ ebe akwadoro maka ndị na-eme njem njem gburugburu ụwa. Otu agwaetiti nke aki oyibo, osisi mkpụrụ osisi na ọtụtụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Maka narị afọ ọhụrụ otu n'ime osimiri ya bụ otu n'ime osimiri atọ kachasị mma n'ụwa ma kemgbe ahụ, enweghị onye nwere obi abụọ na Boracay bụ paradaịs elu ala.
O nwere osimiri abụọ dị egwu, ama Playa Blanca na Bulabog, ma n’akuku abụọ nke agwaetiti ahụ, otu n’akụkụ ọdịda anyanwụ, nke ọzọ n’ebe ọwụwa anyanwụ. Onye mbu na onye kacha ewu ewu nwere ihe ruru kilomita anọ nke ájá ọcha ma jupụta na ụlọ nkwari akụ, ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ mmanya na azụmahịa nke ụdị dị iche iche, mana ka ị na-eje ije, ihe na-ebelata nwayọ nke mere na ọ bụ nnukwu ebe ịnweta obere ọrụ na obere udo.
Maka ikuku ikuku na kitesurfing nhọrọ bu osimiri Bulabog. Ma ọ bụ izu ike ma ọ bụ ikpori ndụ, ọ dị mkpa ka ị doo anya n'oge oge n'afọ ọ ga-adịrị gị mfe iji nwee ezigbo oge n'agbanyeghị ihe ị họọrọ. Ihu ọma enwere oge abụọ, akọrọ na mmiri na nke kacha mma na-emefu oké ezumike bụ gaa n’agbata ekeresimesi na njem.
Otu esi esi Manila gaa Boracay
Site na Manila fastzọ kachasị ọsọ bụ iji ụgbọ elu si n'ụlọ ọdụ ụgbọ elu na-aga n'àgwàetiti Panay. Ma ọ bụ ị ga-efega obodo Kalibo ma ọ bụ obodo Caticlan, na Panay Island. Gbọ elu ndị ahụ ga-ewe anyị ihe karịrị otu elekere na ụlọ ọrụ ndị na-erubere ya isi bụ Mmụọ Asia, Philippine, Cebu Pacific ma ọ bụ Air Philippines.
Nhọrọ kachasị mma bụ iji ụgbọelu gafere site na Caticlan na ọ bụ ezie na ha bụ ndị obere ụgbọ-elu ha na-efe ala na echiche dị ukwuu. Ọzọkwa, enwere ụgbọ elu kwa ụbọchị na Boracay mana ọ bụrụ na ịchọọ njem ogologo oge, nke a bụ nhọrọ kacha mma. Ozugbo Caticlan ị ga-ewere ọgba tum tum-tricycle gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri wee nyefee mmiri, oche ụgbọ mmiri, na Boracay nke bụ nkeji ihe ọ bụla ọzọ.
Site na Kalibo njem ahụ ka ogologo n’ihi na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ji bọs ma ọ bụ obere ụgbọ were otu ma ọ bụ awa abụọ. Ogologo oge ụgbọ elu ahụ na-abanye na 737 mana mgbe ahụ ị nwere awa ahụ na ọkara ahụ site na bọs ma ọ bụ obere obere gaa Caticlan. Site na ebe ahụ oge ọzọ jiri ụgbọ mmiri na-ahapụ gị n'otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri atọ ma ọ bụ Bogbọ mmiri ụgbọ mmiri na Playa Blanca, n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Boracay.
N'oge dị elu ọ bụ ihe amamihe dị na itinye akwụkwọ ebe obibi na oge n'ihi na ọ bụ ezie na ị gaghị enwe nsogbu ịchọta ebe ị ga-ehi ụra n'enweghị ndoputa, ị nwere ike ịchọta ndị chọrọ iji ọnụ ahịa ndị a. Ọ bụrụ n’ị gafere ọnwa Julaị na Nọvemba, echegbula onwe gị.
Ọ bụrụ n’ịchọghị ife efe mgbe ahụ ị nwere ike ịga site n'ụgbọ mmiri Ma nhazi ahụ dị mgbagwoju anya karị ebe ọ bụ na ihu igwe na-adịghị mma nwere ike ịkwụsị njem, agaghị m akwado ya nke ukwuu. Nwere ike bọs si Manila gaa Batangas wee si ebe ahụ ụgbọ mmiri gaa, ụgbọ mmiri ọsọ ọsọ ka mma. Thelọ ọrụ MBRS nwere njem ụgbọ mmiri dị ọnụ ala ma ha pụọ ​​n'ehihie iji rute ụtụtụ echi na Caticlan ma site ebe ahụ ọ bụ 15 nkeji. Enwere ọtụtụ ọrụ kwa izu.
I si Batangas, ị nwekwara ike were ụgbọ mmiri abalị gaa agwaetiti Tablas, ruo obere ọdụ ụgbọ mmiri Odiongan. Si ebe a were gi moto jiipu nke gafere ugwu nile wee kporo gi n'ọdụ ụgbọ mmiri Loorc ma ọ bụ Santa Fe si ebe ị na-abanye ụgbọ mmiri akụ na Boracay. Naanị maka ndị njem, ee. Nwekwara ike ịga site na Manila ruo Dumagit, nke dị n'akụkụ ugwu nke Panay Island, n'ebe ndịda Kalibo. Njem a bụ n'abalị ma site ebe ahụ ị nwere ike ị banye Caticlan n'onwe gị, ma ọ bụ n'ụgbọ ala ikuku ma ọ bụ na moto jiipu.
I nwekwara ike iji bọs mee akụkụ nke njem ahụ, n'agbanyeghị na ọ dị ogologo: ị na-agba bọs na Manila ruo Caticlan, ị na-eme njem elekere iri na abụọ kwa ụbọchị.
Boracay, agwaetiti nke oge atọ
Anaghị m ekwu maka oge n'afọ. Boracay O nwere ọdụ ụgbọ atọ ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri n'ụsọ osimiri: 1, 2 na 3. Ha niile dị n'ụsọ oké osimiri nke Playa Blanca, osimiri kachasị ewu ewu, ma bụrụ ebe ọdịda na agwaetiti ahụ. N’ebe nke ọ bụla enwere ụlọ oriri na ọ cafụ ,ụ, ebe a na-ere ihe ọ cafụ cafụ na họtel na ụdị ụlọ oriri na ọ hotelsụ ofụ.
Ọdụ 1 bụ nke dị na mgbago ugwu ka ọdụ 3 bụ nke kacha nso Caticlan na ọdụ 2 dị n'etiti. Ha anọghị ibe ha nso ka ị na-ejegharị ị na-ejikọ ha n’udo. Ikwesiri iburu n'uche na ụgbọ mmiri akụ na-ahapụ gị n'ụsọ osimiri ka ọ bụrụ ihe amamihe dị na ya iji akpaazụ gaa n'ihi na akpa ahụ nwere ike ịmị mmiri. Enweghị ezigbo okwute na mmiri ruru nkwonkwo ụkwụ gị, na-atụ anya.
Onye ọ bụla ọdụ nwere akara nke ya: mgbe 2 kachasị na-ekwo ekwo, na-ada oke ụda na igwe mmadụ na ndị na-ere ahịa n'okporo ámá. La 1 na 3, ọ bụ ezie na ha nwere ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ụlọ mmanya, ọ dịtụ jụụ. Njegharị niile na-apụ na osimiri ndị a ya mere ị ga-amata ha nke ọma. Ndụmọdụ m bụ ka ị nọrọ n'ọnụ ụlọ nke 2 na nke 3 iji zere ime mkpọtụ.
Dịka m kwuru n'elu, ị nwere ike ịbịaru na ndoputa ma ọ bụ na-enweghị ndoputa mbu, mana ihe niile dabere na oge nke afọ. Achọghị m ịmegharị, ọ masịrị m ịmata ebe m na-aga ka m wee kwado ịgba akwụkwọ. Na ọdụ 3 ị nwere ike ịnwale ọdịmma gị na Osisi Osisi, ebe obibi dị ala ma dịkwa ọnụ ala, yana na ọdụ 1 nhọrọ bụ La Fiesta Resort, dị naanị mita iri atọ site n'ụsọ osimiri mana yana ikuku oyi na nnukwu mbara ihu.
N'afọ gara aga, ọnụego maka La Fiesta bụ $ 35 kwa ụbọchị. Nri adịghị ọnụ na Boracay n'ihi na e nwere ọtụtụ narị chiringuillos n'ụsọ osimiri ma ọ bụ ụlọ ahịa dị mfe karị ebe ị na-eri ihe maka 3 ma ọ bụ 4 dollar ụfọdụ nri mara mma na iko biya Ọ bụrụ na ịchọrọ ndepụta ọnụahịa ziri ezi mgbe ahụ ị nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ njem nlegharị anya Philippines n'ihi na enwere ọnụahịa ndepụta maka ebe obibi, nri, njem mmụta na mmefu ndị ọzọ dị mkpa.
Na otu izu na Boracay ezu na ndị ọzọ. Ọ bụ maka ịnụ ụtọ ụsọ osimiri, ịnya ụgbọ mmiri gaa agwaetiti ndị gbara gị gburugburu, ịnụ ụtọ ọdịda anyanwụ mara mma, ọ bụghịkwa ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na ị gbakwunye ụbọchị atọ na Manila, ọ kwesịrị ịbụ njem magburu onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Boracay, ebe kachasị mma na Philippines
A njem na 4 nke kasị mkpa obodo na Brazil
Uru nke ịgagharị ụwa